Yalumba The Signature Riedel Giftpack Cabernet/Shiraz 2014 Wine (TW60280) ~ ICT.com.mm
HomeYalumba The Signature Riedel Giftpack Cabernet/Shiraz 2014 Wine (TW60280)
Yalumba The Signature Riedel Giftpack Cabernet/Shiraz 2014 Wine (TW60280)
Country: Australia Wine Style: Red Wine Bottle Size: 750ml Winery: Yalumba Vintage: 2014 Alc: 14% ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော် ဝိုင်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ Yalumba မှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ The Signature Riedel Giftpack Cabernet/Shiraz ဝိုင် (2014) ဖြစ်ပါတယ်။ ဩစတြေးလျနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ဝိုင်စပျစ်စိုက်ခင်းတွေကနေ... [Learn more]
ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော် ဝိုင်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ Yalumba မှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ The Signature Riedel Giftpack Cabernet/Shiraz ဝိုင် (2014) ဖြစ်ပါတယ်။ ဩစတြေးလျနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ဝိုင်စပျစ်စိုက်ခင်းတွေကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းအနေနဲ့ နာမည်ကျော် ဝိုင်နီစပျစ်သီးဖြစ်တဲ့ ‘Cabernet’ စပျစ်သီးနဲ့ အရောင်ရင့်အခွံရှိ ဝိုင်နီစပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ‘Shiraz’ စပျစ်သီးတွေကို အသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ Alcohol ပါဝင်မှု 14% ရှိတဲ့ ဝိုင်နီအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ မွှေးကြိုင်သင်းပျံ့ပြီး ထူးခြားတဲ့အနံ့အရသာနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ ဩစတြေးလျဝိုင်နီ ဖြစ်ပါတယ်။
Yalumba The Signature Riedel Giftpack Cabernet/Shiraz 2014 Wine
A blend of fruit from the Barossa floor & Eden Valley, this Cab-Shiraz is aged 21m in 35% new French barriques & Hungarian hogsheads w. older French, American & Hungarian wood. Med ruby. Smoky cedar, concentrated black cherry, tobacco, oak spice, blackcurrant & cassis. Good fruit ripeness but already pretty developed.